युट्युबमा भिडियो हेरेर दाजु र बहिनीले जे सिके, थाहा पाउँने जो कोही हैरान ! – Khabar 27 Media
March 12, 2021 March 12, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on युट्युबमा भिडियो हेरेर दाजु र बहिनीले जे सिके, थाहा पाउँने जो कोही हैरान !
काठमाडौं:एक अनौठो प्रकरणमा संलग्न दाजु–बहिनी पक्राउ परेका छन् । भारत, महाराष्ट्रको पिपरीमा प्रहरीले दाजु र बहिनीलाई नक्कली नोट छाप्ने प्रकरणमा संलग्न भएको बताउँदै नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरुको साथबाट ५०, १००, २००, ५००, र २,००० का नक्कली मुद्रा बरामद गरिएको हो ।
यस समूहमा थप व्यक्तिहरू पनि मिलेको हुन सक्ने बताउँदै प्रहरीले गम्भीर ढंगले अनुसन्धान थालेको छ । मंगलबार, संगीता भोसरी तरकारी बजारमा तरकारी किन्न आइन् । त्यसपछि उनले
केहि नक्कली नोटहरू सहित विक्रेतालाई नक्कली नोट पनि दिइन् । नोटको गुणस्तर देखेर विक्रेतालाई शंका लाग्यो । यसको जाँच गरेपछि उनले थाहा पाए कि यो नक्कली नोट हो ।
यस पछि जब उनले संगीतालाई प्रश्न गरे, उनी डराइन् र भागिन् । विक्रेताले प्रहरीलाई फोन गरी जानकारी दिए । संगीता उनको घरबाट मंगलबार साँझ पक्राउ परेकी हुन् । संगीताको घरबाट
दुई लाख र कलर प्रिन्टर र नक्कली मुद्रा फेला पारिएको छ ।जानकारी अनुसार संगीता र उनको भाइले युट्यूबमा भिडियो हेरेर नक्कली नोट बनाउन सिकेका थिए । संगीताको विवाह केही वर्ष अघि भएको थियो र उनका दुई बच्चा पनि छन् ।
यी चर्चित नेपाली अभिनेत्री हरूको पढाइ कति? थाहा छ ..? थाहा पाउनुहोस् !(फोटोसहितको पढाइ लिस्ट)
आमा कहाँ छिन् भनेर सोध्दा नबताएपछि पिताले आफ्नै छोरीलाई २० गो , ली हा नि दिए I
May 25, 2021 May 25, 2021 Shyam Lama
﻿ नौ लाख बलेको दियोलाई दर्शन गरौँ, मनोकामना पुरा हुनेछ
October 4, 2021 October 4, 2021 Shyam Lama